पशुपतिको जग्गा भाडा प्रतिआना मासिक साढे ९ रुपैयाँ ! - Deshko News Deshko News पशुपतिको जग्गा भाडा प्रतिआना मासिक साढे ९ रुपैयाँ ! - Deshko News
पशुपतिको जग्गा भाडा प्रतिआना मासिक साढे ९ रुपैयाँ !
पर्यटकीय क्षेत्र चाबहिल-बौद्धको मूल सडकनजिक जग्गा भाडामा लिँदा प्रतिआना कति मोल तिर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पशुपति विकास कोषले हायात रिजेन्सी होटललाई दिएको जग्गाको भाडा रकम हेर्नुपर्छ। कोषले व्यापारिक निकाय हायात होटललाई एक आना जग्गा लिजमा दिएबापत मासिक नौ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा लिइरहेको छ भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, वास्तविकता यही हो। कोषले उक्त होटललाई १८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ। तर, यसबापत कोषले प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएको छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
होटलले कोषलाई दिने तिरो ०६८ सालमा ५० गुणा वृद्धि गरी यति पुर्‍याइएको हो। कोषले प्रतिरोपनी जग्गाको एक मुरी ९२० पाथी० धानका हिसाबले जग्गा लिजमा लगाएको हो। जसअनुसार १८ रोपनीको मात्रै अठार मुरी धानको मूल्य हायातले कोषलाई तिरे पुग्छ। कोषका अनुसार उक्त जग्गामा तारागाउँ विकास समितिको मोही कायम छ। समितिले हायात रिजेन्सीलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो। पशुपति गुठी मुलुककै सबैभन्दा धनी गुठी हो। जसअन्तर्गत करिब ५ सय रोपनी जग्गा छ।
कतिपय जग्गाचाहिँ दर्ता हुनै बाँकी छ। कतिपय फिल्डबुकमा मात्र उल्लेख भएकामा त्यसलाई कसरी पुर्जामा ल्याउने विषयमा कोषले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। साविक लगत भिडेर आएपछि मात्र कोषको गुठी जग्गाबारे प्रस्टता हुने कर्मचारीको भनाइ छ। हायाताले औपचारिक करार सम्झौतामै उपभोग गरेका १८ रोपनीबाहेक पशुपतिकै दर्ता छुट अन्य जग्गासमेत प्रयोग गरेको हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन्। कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा।गोविन्द टण्डनका अनुसार निजी क्षेत्रले कोषको हजारौं रोपनी जग्गा कौडीकै भाउमा प्रयोग गरिरहेको छ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गुठी जग्गाको उपयोगअनुसार कुतबाली तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजी वा संस्थागत रूपमा करोडौं, अर्बौ आम्दानी गर्नेले दिने तिरो कौडीको भाउसरह छ।’ उनले आफू कोषमा रहँदा प्रयोग र आम्दानीका आधारमा तिरो तोक्न पहल गरेको तर त्यसमा अनेक बाधा–व्यवधान आइपरेको बताए। ‘होटलजस्ता अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गुठी जग्गा दुरुपयोग गरिएका छन्, प्रयोग गर्न पाउँछन् तर कोषले प्रयोग र आम्दानीअनुरूप रोयल्टी लिन सक्नुपर्छ,’ डा। टण्डनले भने।